Maskidy N95, Maskitsoka tarehy, Mask-pitsaboana, Mask-pitsaboana - Nuomigao
Fujian Nuomigao Medical Technology Co., Ltd dia mpamokatra matihanina momba ny fikarakarana ara-pahasalamana manokana sy saron-tava fitsaboana, mirehareha atrikasa maoderina maoderina, fitaovana famokarana mandroso anisan'izany ny milina mason-tsolika mandeha ho azy, milina masira N95 otomatis.
Araka ny filanao manokana dia hanome anao serivisy consultation matihanina izahay
Tsindrio bebe kokoa
Manolotra anao tsy ny vokatra ihany izahay fa koa vahaolana avo lenta sy serivisy kalitao avo lenta
Makà taratasy fanamarinana fisoratana anarana ara-pitsaboana, taratasy fanamarinana CE ary fanamarinana FDA
Izy io dia nanorina rafitra rafitra feno sy tambajotra serivisy varotra maro, ary nanorina fifandraisana tsara amin'ny orinasa maro
Potika (fahaiza-manao isam-bolana)
Aza matahotra! Mihena ny fahaizan'ny masika
Miaraka amin'ny fampandrosoana mitohy ny areti-mifindra dia nitombo be ny fanjifana masika. Ny mason-tava rehetra vokarina dia arovana fiarovana bebe kokoa ho an'ny vahoaka sy ny mpiasan'ny mpitsabo. Ny departemantan'ny mahay sy ny orinasam-pamokarana mifandraika amin'izany dia mihazakazaka amin'ny fotoana. Raha ny angona farany, hatramin'ny 7 febroary, nahatratra 73% ny tahan'ny famerenan'ny orinasam-tava manerana ny firenena.
inona no tokony ho fantatsika momba ny sarontava ny fomba fanaovana saron-tava? (aza atao)
mandoko loko: tsy maintsy mijanona eo amin'ny toerany foana izy io: aza misintona azy rehefa miala amin'ny efitrano, na rehefa miresaka amin'ny marary iray na te hanala fofona mora fotsiny inona ny saron-tava mety? araka ny fomba fiasa: ambaratonga fiarovana (ambany, antonony na avo) fankaherezana ary mety: tsara orona sombiny tha ...
Ny famenoana mason'i Sina ho an'izao tontolo izao: kaonty famokarana masaka ho an'ny antsasaky ny fanondranana erantany
Raha mitombo ny fangatahan'ny izao tontolo izao momba ny saron-tava, dia mety ho tsinontsinoavina tsikelikely ankehitriny i Shina. Tan Qunhong, tale jeneralin'ny orinasa mpamokatra masika kely any Chine Central dia nilaza fa nahavita ny fividianana ny governemanta Shinoa izy ary efa namerina ny fanondranana entana izao. In additi ...